Cindezela izithombe- Cindezela ama-jpg amaningi ku-inthanethi / ungaxhunyiwe ku-inthanethi
I-Advanced Image compressor
Lungiselela usayizi wesithombe nekhwalithi yesithombe ungaxhunyiwe ku-inthanethi naku-inthanethi usebenzisa i-jpg image compressor ethuthukile.
*Ungangeza izithombe eziyi-10 zokucindezela.
Ungazicindezela kanjani izithombe?
Chofoza Faka Ifayela ukuze ungeze amafayela. Ungangeza amafayela angenamkhawulo.
Chofoza okuthi Qala ukucindezela ukuqala i-compression algorithm ukunciphisa usayizi wesithombe esilayishiwe. Chofoza u-Khansela ukumisa.
Chofoza u- Landa ukulanda i-jpeg / compressed png yakho ecindezelwe noma isithombe noma izithombe ezicindezelwe.
Ungacindezela i JPG, GIF, PNG ngekhwalithi engcono kakhulu. Nciphisa usayizi we-JPG, GIF, ne-PNG endaweni eyodwa.
Kusebenza kanjani ukucindezelwa kwesithombe?
Izithombe zakho ze-smartphone zithatha indawo yokugcina eningi kakhulu. Nakhu ukuthi singazinciphisa kanjani.
Lolu hlelo lokusebenza lwehlisa usayizi wezithombe ngokuhlaziya i-pixel ngayinye. Ngokuhlolwa kwethu, ukunciphisa usayizi wefayela kusuka ezithombeni ezijwayelekile kwahlala phakathi kuka-20% no-85%. I-compressor yesithombe wuhlelo lokucindezela nokukhulisa izithombe zedijithali, kanye nokunakekela ngokukhethekile izithombe zakho zedijithali ukuvikela ikhwalithi yesithombe sakho sangempela. Ama-compressors ethu afaka izinjini zokucindezela ezilahlekile zezithombe nobuchwepheshe.
Nasi isibonelo sendlela lolu hlelo lokusebenza oluzokuvumela ngayo ukuthi unciphise usayizi wezithombe.
Lesi yisibonelo nje sesithombe ukukukhombisa ukuthi izithombe zakho zithuthukiswa kangakanani.
i-photo compress isicelo sokuqala sewebhu esingaxhunyiwe ku-inthanethi.
cindezela izithombe ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi uhlelo lokusebenza olulula nolunamandla lokucinana kwesithombe. Uhlelo lokusebenza luzokuvumela ukuthi ucindezele izithombe kuzithombe ezincane zosayizi ngokulahleka kwekhwalithi noma usebenzisa ukucindezela kokulahleka. Ungafaka uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho bese ulusebenzisa ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ungafaka lolu hlelo lokusebenza kumadivayisi wakho we-Windows / Android / Apple / Linux. Lolu hlelo lokusebenza uhlelo lwamahhala awudingi ukukhokha noma yiluphi uhlobo lwemali. Ukucindezela izithombe zakho ngohlelo lwethu lokusebenza kuyindlela elula yokuqinisekisa ukuthi izithombe zakho zilula, ziyalayisha ngokushesha futhi zilungele ukukhiqizwa. Ungazicindezela kanjani zonke izithombe kusethulo se-PowerPoint. Isicelo sethu sokucubungula isithombe singakusiza ukuthi uguqule i-jpg file compressor online mahhala noma ushintshe usayizi wezithombe noma wehlise usayizi we-jpg.
Ukulandwa okungaphezu kwesigidi esisodwa, i-compression application ingenye yesoftware yokwenza isithombe ethandwa kakhulu etholakala kwi-inthanethi noma kwi-inthanethi. Sisiza izigidi zabathwebuli zithombe, ama-blogger, ama-webmasters, amabhizinisi, noma abasebenzisi abayitoho ekugcineni, ukuthumela, kanye nokwabelana ngezithombe ezidijithali. Isicelo sinquma futhi sifake kabusha izithombe kahle, sisivumele ukuthi sithuthukise amafayela wesithombe ngaphandle kokushintsha ukulungiswa noma ukulahleka kwekhwalithi. Sizama ukusebenzisa i-AI ukunciphisa usayizi wesithombe, njengaseSilicon Valley ye-HBO. Lolu hlelo lokusebenza luzokwenza izithombe zakho zisheshe zilayishwe ekuxhumaneni kwe-inthanethi okuhamba kancane.